Maxey kawada hadleen Sheekh Shariif iyo Wakiilka Qaramada Midoobay? – Bandhiga
Home Maxey kawada hadleen Sheekh Shariif iyo Wakiilka Qaramada Midoobay?
Maxey kawada hadleen Sheekh Shariif iyo Wakiilka Qaramada Midoobay?
in Maxey kawada hadleen Sheekh Shariif iyo Wakiilka Qaramada Midoobay?
Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan gaar ah ku yeeshay wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mr James Swan iyo Madaxweynihii dowladii ku meel gaarka aheyd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmad.
Kulanka waxaa looga hadlay xaaladda Siyaasadeed ee dalka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka weli hor gudban dhowladnimada Soomaaliya.
Sheekh Shariif Sheekh Axmad oo si kooban kaga warbixiyay kulanka ayaa soo qoray” Waxaan kulan gaar ah la qaadannay aniga iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga Himilo Qaran Madaxa howlgalka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Amb James Swan”
Kulanka ayaa ku soo aaday xili wali xukuumadda Federalka aysan faah-faahin hor istaagii ay ku sameysay Sheekh Shariif isagoo ku wajahn Kismaayo.
James ayaa ka dhageysaty Sheekha caqabadaha siyaasadeed ee jira iyo aragtida xisbiga Himilo Qaran ee ah sarreynta sharciga, Soomaaliya oo is wadat, wuxuuna kaga mahadceliayay sheekha sida UN-ka u raadinayo siyaasad fadhisa.